सेयर बजार पस्नेले जान्नै पर्ने कुरा, कसरी परिन्छ ‘क्लोज आउट’ मा ? - आर्थिक पाटी
सेयर बजार पस्नेले जान्नै पर्ने कुरा, कसरी परिन्छ ‘क्लोज आउट’ मा ?
चालु आवमा मात्रै क्लोज आउटको कारबाहीबाट ११ करोड उठ्यो
काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावलीले क्लोजआउटको व्यवस्था गरेको हो । सो विनियमावली लागू भएपश्चात सो व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । धितोपत्र बिक्रीकर्ताले आफूले विक्रिगरेको धितोपत्र राफसाफ तथा फर्छ्यौट गर्ने समयावधि भित्र सम्बन्धित राफसाफ सदस्यको खातामा (आफुले धितोपत्र बिक्री गरेको ब्रोकर) जम्मा नगरेमा उक्त बिक्री कारोबारको रकमको २० प्रतिशत जरिवाना सो बिक्रीकर्ताबाट असुल्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई क्लोजआउट भनिन्छ ।
क्लोज आउटमा पर्ने क्रम नरोकिएको सिडिएससीको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष (२०७७∕७८) मा क्लोज आउट कारबाहीबाट १० करोड रुपैयाँ ८९ लाख ८६ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ सिडिएससीले उठाएको छ । सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्योपानेले सो रकम उठेको जानकारी दिए । यो वर्ष ११ हजार ६ सय ८९ कारोबार क्लोज आउटमा परेको छ । क्लोजआउट कारबाहीमा उठेको रकम मध्ये २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर स्वरूप राजस्व कट्टा गरी बाँकी रकम सम्बन्धित खरिद कर्तालाई जान्छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत ५० लघुवित्त कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? (विश्लेषण)
आईपीओ रिजल्ट हेर्न वञ्चित भए लगानीकर्ता, ३ वटै सर्भरमा समस्या
कुमारी इक्विटी फण्डको इकाईका लागि आजदेखि आवेदन खुला
ज्योेति लाइफले फागुन २३ गतेबाट ६६ लाख कित्ता आइपीओ खुला गर्ने